Golaha Wasiirrada oo si lama filaan ah xilka uga qaaday Agaasimaha Nabadsugidda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Golaha Wasiirrada oo si lama filaan ah xilka uga qaaday Agaasimaha Nabadsugidda
7th September 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid shir aan caadi ahayn oo shir gudoominayey Ra’iisul Wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed.
Shirka ayaa looga hadlay amniga guud ee dalka, iyadoo golaha Wasiiradu xilkii ka qaadeen Agaasimihii Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya C/laahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe).
Afhayeenka Xukuumadda Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo saxaafadda la hadlay kulanka kaddib ayaa sheegay shirka golaha Wasiirrada in warbixin ku aadan amniga guud ee dalka laga dhageystay Wasiirrada Amniga Qaranka iyo Wasiirka Gaashaandhigga.
Sidoo kale wuxuu sheegay Afhayeenka in xilkii agaasimaha Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya laga qaaday Mudane C/laahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) si ku-meel gaar ahna xilkaasi loogu dhiibay ku xigeenkiisa.
Mr Sanbaloolshe ayaa ka mid ah xubnaha aadka ugu dhow Madaxweynaha Soomaaliya oo bishii July uu magacaabay xilka Agaasimaha Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka.
Lama oga waxaa uu ka yeeli doono Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud oo aan la ogeysiinin talaabada ay qaadan Golaha Wasiirada.
Muqdisho: Nabadsugida Gobolka Banaadir oo amar ku xirtay Radio Kulmiye
Idaacada Kulmiye oo dib hawada ugu soo laabtay iyo SIMBA oo wali hawada ka maqan